Zarganar of Burma & Burmese People: 2008
မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂၊ ဓာတ်ပုံ - နာရီ
ကိုဇာဂနာ ကိုယ်စား မိတ်ဆွေတဦးက ဆုကို လက်ခံရယူခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ကိုဇာဂနာ ဇနီး၊ မလွင်မာဦးထံက ပေးပို့တဲ့ ကျေးဇူးစကားကို ဖတ်ကြားပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မလွင်မာဦးက -
“ကိုဇာဂနာအတွက် ဆုကို ကြေငြာတော့ - ဒီလူဟာ သရော်တဲ့သူ၊ ပြက်လုံးထုတ်တဲ့သူလို့ စပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီလူဟာ အစိုးရက မည်သို့ပင် ပိတ်ပင်တားဆီး ဖိနှိပ်ထားစေကာမူ ပြည်သူလူထုကြားထဲကို မီဒီယာမျိုးစုံ အထိရောက်ဆုံးသုံးပြီးတော့ အရောက်ပို့နိုင်တဲ့သူလို့ ဆက်ပြောလိုက်တယ်။ အင်မတန် ရဲရင့်တဲ့သူ၊ ထောင်အကြိမ်ကြိမ် ကျတဲ့သူ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမှာ အနုပညာရှင်တွေကို စည်းရုံးပြီး သပိတ်မှောက်သံဃာတွေကို ဆွမ်းကပ်တဲ့သူ၊ စွယ်စုံတဲ့နည်းတွေသုံးနိုင်တဲ့သူ - သရုပ်ဆောင်မယ်၊ သီချင်းဆိုမယ်၊ စာရေးမယ်၊ အင်တာနက်သုံးမယ်၊ အင်တာဗျူးတွေလုပ်မယ်၊ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြည်သူထံအရောက် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စအားလုံးကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆက်ပြောပြီးတော့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ အနုပညာရှင်တဦးအဖြစ် သူ့ကို ဆုချီးမြှင့် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် … လို့ ကြေငြာတာဗျာ …”
(ဓာတ်ပုံ - ဆု၊ ဇာဂနာအကြောင်းကို ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်တဦး မိတ်ဆက်ပေးနေစဉ်၊ ဆုပေးပွဲ မြင်ကွင်း)
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:10 PM 1 comments
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 10:17 PM0comments
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 9:28 PM 1 comments
White Rainbow - Burmese Poetry Festival 2006 Part One
Labels: Music VDO, V
ဇာဂနာ၊ စောဝေ၊ ဇော်သက်ထွေးနဲ့ အောင်ဝေး ပြီးတော့
၂၀၀၆ အဖြူရောင် သက်တံ အမှတ်တရ
အဖြူရောင် သက်တံ ၂၀၀၆ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုခံအားကျဆင်းတဲ့ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ မြန်မာကလေးငယ်များအတွက် အဲသည်တုံးက မြန်မာ အနုပညာ ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့ အနုပညာအလှူပွဲ တခုဖြစ်ပါတယ်။
၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတွေက ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းမှာ ပြည်ပမဲဇာရောက်ခဲ့ရသူ အောင်ဝေး၊ အဲဒီနောက် ကဗျာတပုဒ်နဲ့ အကျဉ်းကျနေသူ စောဝေ၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်း အရေးအခင်းမှာ အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဇာဂနာ၊ ဇော်သက်ထွေးတို့တွေ အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေကို အမှတ်တရ အနေနဲ့၊ ပြီးတော့ စစ်အစိုးရဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် ခုချိန်မှာ ခိုကိုးရာမဲ့ ချို့တဲ့လျက်ရှိနေတဲ့ HIV ရောဂါသင့် ကလေးသူငယ်များ အားလုံးသို့
၂၀၀၆ တုံးက ထိုးခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်း …
အခု … လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့ …
လူတိုင်းအတွက် ထိုးတဲ့ခေါင်းလောင်းသံ …
(ဒီနေရာက သွာုးကည့်နိုင်ပါပြီ - MoeMaKa Dot Net Video Archives)
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 6:34 PM0comments
Zarganar won Canada PEN award
သတ္တိရှိရှိဖြင့် လွပ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့မှုများအတွက် လူရွှင်တော်ဇာဂနာကို ကနေဒါ ကလောင်ရှင်များအဖွဲ့ က One Humanity Award (တမျိုးတည်းသောလူသားဆု) ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
လွပ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကနေဒါကလောင်ရှင် များအဖွဲ့၏ (၂၅) နှစ် မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဇာဂနာဟုလူသိများသည့် ကဗျာ ဆရာလူရွှင်တော်နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မောင်သူရကို ယခုနှစ်တွက် ဆုချီးမြှင့်ရန် ရွေးချယ်လိုက်သည်ဟု ကနေဒါကလောင်ရှင်များအဖွဲ့ PEN Canada ၏ ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 10:46 PM0comments
Min Swe Thit - Zarganar from Mizzima
ကိုသူရ မိခင်၏ဇာတိက မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ် တောင်စွန်းကဖြစ်သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသား မောင်သူရ ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း မိခင်ဇာတိ တောင်စွန်းသို့ အလည်ရောက်၍ နေသည်။ ဆွေမျိုးများနှင့် တရုန်းရုန်း ….။ ကေလာသတောင်သို့ တတ်သည်။ ကျိုက်ထီးဆောင်း ဘုရားသို့ သွား၏။ ဆွေမျိုးညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့် …..။ ရန်ကုန်သား မောင်သူရ ကျေးလတ်တွင် ပျော်နေ၏။ ထိုစဉ် …. တောင်စွန်းသို့ အငြိမ့်ပွဲဝင်၏။ အငြိမ့်က မော်လမြိုင်အငြိမ့် ….။ ဗလာပွဲပင် …..။ စင်ထိုးသည်နှင့် မောင်သူရ အငြိမ်မနေနိုင်တော့ …… စင်ပေါ်တက်ချင်နေ၏။ ဆွေမျိုးများက မြှောက်ပေးကြ၏။ အငြိမ့်မှ လူရွှင်တော်ကြီးများနှင့် ရင်းနှီးအောင် ကြိုးစားပေးကြ၏။ မြို့ခံများက ဧည့်ခံရင်း ….လူရွှင်တော်ကြီးများနှင့် ရင်းနှီးသွားကြသည်။ လူရွှင်တော်ကြီး နှစ်ယောက်က မောင်သူရအား ပျက်လုံးတွေ တိုက်ပေး၏။ သင်ပေး၏။ မောင်သူရက ခြေတကြွကြွ…..။ ဆွေမျိုးများကလည်း အားပါးတရ….။ ညရောက်ပြီ…..။ အငြိမ့်ထွက်ပြီ ……။ ၁၅-နှစ်သား မောင်သူရလည်း လူရွှင်တော် အ၀တ်အစားများနှင့် စင်ပေါ်မှာ …..။ ညနေက လူရွှင်တော်ကြီးများ တိုက်ပေးထားသည့် ပျက်လုံးများကို ပျက်ရန်အသင့် ….။ စင်ပေါ်ရောက်တော့ …. ညနေက ပျက်လုံးများ သင်ပေးခဲ့သည့် လူရွှင်တော်ကြီး နှစ်ယောက်က လူရွှင်တော်လေး မောင်သူရအား လှည့်၍ပင် မကြည့် …. ။ သူတို့နှစ်ဦးပင် ပျက်လုံးများအား ရေပက်မ၀င် ပျက်၍ နေကြ၏။ ပရိတ်သတ်က တ၀ါးဝါး ….တဟားဟား…..။ လူရွှင်တော်လေး မောင်သူရ ငေါင်၍ နေသည်။ ဘယ်အချိန် သူဝင်ပျက်ရပါ့မလဲ ….။ တွေး၍ ကြည့်၏။ ငေး၍ ကြည့်၏။ ဤသို့နှင့် ဇက်စင်ပေါ်၌ တောကြည့်တောင်ကြည့် ဖြစ်၍လာသည်။ ပရိတ်သတ်အား ကြည့်ရင်း အားငယ်လာသည်။ လူရွှင်တော်ကြီး နှစ်ယောက်ကတော့ မင်မောင်းအပြည့်နှင့် ပျက်၍ကောင်းဆဲ …..။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လူရွှင်တော်လေးမောင်သူရ ဇာတ်စင်ပေါ်၌ နေရင်း ….. ရင်ထဲ၌ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လာ၏။ အငြိမ့်စင်တိုင် အကွယ်သို့ မသိမသာ ခိုဝင်းရင်း …. တိုးဝင်ရင်း နှင့် ……။ ပရိတ်သတ်အား မျက်နှာမပြ၀ံ့တော့ ….။ နှင်းမှုန်များအောက်၌ မောင်သူရ ချွေများ စို၍ နေခဲ့ရ၏။
ထိုစဉ်က …. ဇာဂနာဟူ၍ မဖြစ်သေး …..။
"ကျနော့် ဘ၀မှာ ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်ခဲ့သလို သင်ခန်းစာ အကြီးကြီးရခဲ့တဲ့ အချိန်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ ကျည်ဆန်မရှိလို့ ဆိုပြီး သူများပစ်တာ ခံခဲ့ရတာပါ။ သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း ကျနော် ၀မ်းစာပြည့်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရသလို နေရာရအောင် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်"
( ရတီ -၂၀၀၆ခုနှစ် မတ်လထုတ် ဇာဂနာ၏ဆောင်းပါး -စာမျက်နှာ ၁၇၄ မှ )
ကိုသူရသွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀တွင် ….. ကျောင်းကပွဲများ၌ အငြိမ့် ကဖြစ်လာ၏။ ဆဌမအကြိမ် သွားဖက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား၌ အငြိမ့်ပွဲပါ၏။ ကိုသူရတို့၏ အငြိမ့် ….။ " ပုလဲသွယ်အငြိမ့်" ဟူ၍ အမည်ပေးသည်။ အခြား ကျောင်းသားများနှင့်အတူ ကိုသူရလဲ လူရွှင်တော် လုပ်သည်။ ပုလဲသွယ်အငြိမ့်တွင် …. လူရွှင်တော် လေးယောက်ရှိ၏။ မိုလာ၊ စကေလာ၊ တင်ချာနှင့် ဇာဂနာဟူ၍ အမည်ပေးကြ၏။ အားလုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများနှင့် ရင်းနှီးသည့် အသုံးအဆောင် အမည်များ …..။ ဤတွင် ကိုသူရမှ ဇာဂနာ ဖြစ်လာခဲ့၏။ (ကို) ဇာဂနာ၏ အနုပညာ ဖြေဖျော်မှုက ……သစ်ပုတ်ပင်နှင့် အင်းယားကမ်းစပ်၌ပင် ရပ်၍မနေ ….။ ပြည်သူလူထု အတွင်းသို့ တိုး၍ စီးဝင်ရန် ကြိုးစား၏။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(လှိုင်)မှ အနုပညာရှင်များနှင့် ပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ၏။ ဂီတဖက်မှ ကိုင်ဇာ၊ ဗထူးချစ်၊ မောင်မောင်ချန်တို့နှင့် တွဲမိလာခဲ့၏။
ရန်ကုန်မြုိ့တော် ခန်းမရှေ့ စင်တင်ဖျော်ဖြေပွဲပြီးသည့်နောက် …. (ကို) ဇာဂနာ စဉ်းစားသည်။ ကံ့ကော်တောအား ကျော်ခဲ့ပြီ….။ လူထုကြီးအတွင်း များများနဲ့ မြန်မြန် ပျံ့နှံနိုင်အောင် အနုပညာကို ဘယ်လိုဖြန့်မလဲ……။ အငြိမ့်စင်ပေါ် တက်ကပါက …. တစ်ပွဲကြည့်မှ ပရိတ်သတ်က ငါးထောင်….တစ်သောင်း……။ နည်းသည်။ အားမရ…..။ (ကို) ဇာဂနာ စဉ်းစား၏။ ကြားခံမီဒီယာ အသုံးပြုရမည်။ အများဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး ပျံ့နှံ့နိုင်သည်က ရုပ်မြင်သံကြား…..။ TV ပရိတ်သတ်က သန်းဂဏန်းအထိ ရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး …. တနံ … တလျား ….။ ချက်ချင်း ပျံ့နှံ့မည်။ ဤတွင် မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွင် ဖျော်ဖြေအငြိမ့် ကပြနိုင်ရေး အတွက် (ကို) ဇာဂနာ လုံးပမ်း၏။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဂုဏ်ပြုအငြိမ့်အား မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ဖျော်ဖြေနိုင်ရေးအတွက် (ကို) ဇာဂနာ ကြိုးစား၏။ ထိုစဉ်က " မိုးနတ်သူဇာအငြိမ့်" အား ထူထောင်ပြီး ဖြစ်သည်။ မင်းသမီးက (မ) သီတာဝင်း……။ လူရွှင်တော်များက …..တက်တူ၊ စုတ်ချွန်း၊ ပိန်ပိန်နှင့် ဇာဂနာတို့ ဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြား ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်တွင် (ကို) ဇာဂနာက သမိုင်းရေးရာ နောက်ခံထားသော အငြိမ့်ခန်းအား လုပ်ချင်၏။ (ကို) ဇာဂနာအချိန်ပေး၍ လုပ်ခဲ့ရသည်။ ရှေ့မှီ….အနုပညာသည်ကြီးများနှင့် တွေ့၏။ မေး၏။ မှင်သက်ခဲ့ရ၏။ အမေ (ဒေါ်)အောင်ကြည်၊ ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျုိးချစ်၊ ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို၊ (ဒေါ်)ထား၊ မြန်မာ့အသံ ဦးသစ္စာ…..တို့က (ကို) ဇာဂနာအား ကူညီပေးကြ၏။ လမ်းညွှန် ပေးခဲ့ကြ၏။ ဤသို့နှင့် …… သမိုင်း အချက်အလက်များအား (ကို) ဇာဂနာ မှတ်သား ရှာဖွေခဲ့ရ၏။ ၁၉၄၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်နှင့် ပြဇာတ်ဌာနအား ဆရာကြီး ဦးဥာဏ ခေါင်းဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့၏။ ပြဇာတ်ဌာန၏ ဌာနမှူးက ဒဂုံဆရာတင် …။ ဆရာရန်နိုင်စိန်က ထိုဌာန၏ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး….။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့ ….. လွတ်လပ်ရေးရလျှင် ….. မြန်မာ့အသံမှ ထုတ်လွှင့်ရန် လွတ်လပ်ရေး သီချင်းတစ်ပုဒ် လိုသည်။ ရှိပြီး သီချင်းက ဆရာရွှေတိုင်ညွှန့်ရေးသည့် ဂျပန်ခေတ်ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးပေးတုန်းက သုံးခဲ့သည့် သီချင်း ဖြစ်သည်။ မသုံးချင်….။ သို့နှင့် ….. သီချင်းသစ်အား ရွေးကြ၏။ ဆရာကြီးဦးဥာဏက စာသားရေးပြီး ….ဆရာရန်နိုင်စိန်က အသံထည့်၏။ ဤသို့နှင့် လွတ်လပ်ရေးသီချင်းသစ် တစ်ပုဒ်ရလာ၏။ ဤသီချင်းအား ၁၉၄၈ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့ မနက် (၄)နာရီ (၂၀) မီနစ်တွင် မြန်မာ့အသံမှ လွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးသည်နှင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့၏။
ဤသီချင်းအား (ကို) ဇာဂနာက ၁၉၈၄ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် ဖြေဖျော်ခန်းတွင် " မိုးနတ်သူဇာ အငြ်ိမ့်" ၏အဖွင့် သီချင်းအဖြစ် ပြန်၍ဖော်ထုတ်ခဲ့၏။
"……. ဗမာဟေ့ ဗမာ ကမ္ဘာရှေ့မှာ ဗမာဟေ့လို့ ကြွားဝင့်စရာ တို့အဆင့်အတန်းနဲ့ လျှမ်းတင့်ဝေဆာပြီ ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ ဒါတို့ပြည် အဖိုးမဖြတ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အေးချမ်းသာယာစည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတိုင်းသည် အခွင့်အရေးညီညီ တကယ်လွတ်လပ်ပါပြီ"
(ရတီ-၂၀၀၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ဇာဂနာ၏ဆောင်းပါး၊ စာမျက်နှာ ၁၇၃ မှ )
ဇာဂနာနှင့် မိုးနတ်သူဇာက ခွဲ၍မရတော့ ….။ တွဲ၍သာ မြင်နေကြသည်။ ဇာဂနာ၏ ပျက်လုံးများက လူထုကြားမှ လာသည့် ပျက်လုံးများ ဖြစ်၍ လူထုနှင့် ထိမိ၏။ ခေတ်ကြီးက သရော်စရာများနှင့် ပြည့်နေ၍ ဇာဂနာ၏ ပျက်လုံးများက ခေတ်နှင့်ညီ၍ နေသည်။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ဖျော်ဖြေရသလို ….၊ နိုင်ငံအနှံ့ မြို့ကြီးများတွင်လည်း စင်တင်၍ ဖျော်ဖြေကြရသည်။ ဇာဂနာက မိုးနတ်သူဇာအား ဤမျှနှင့် အားမရ …..။ ရပ်မနေချင်….။ အငြိမ့်သဘင်အား ပြောင်းလဲချင်၏။ ဤတွင် မိုးနတ်သူဇာမှ စလိုသည်။
ထိုင်မသိမ်းတွေဝတ်၊ ဆံထုံးကြီးတွေထုံးပြီး အငြိမ့်မင်းသမီးတွေ ကနေတာကြာပြီ…..ရိုးလောက်ပြီ။ ကိုးရီယားမှာလို ၊ ဗီယက်နမ်မှာလို ယပ်တောင်ယိမ်းတွေ …..၊ လယ်သမားယိမ်းတွေလိုမျိုးနှင့် အငြိမ့်ကို တင်ဆက်ချင်သည်။
အငြိမ့်မင်းသမီးနှင့်အဖွဲ့က ကောက်စိုက်သမ၀တ်စုံနဲ့ လယ်ကွင်းထဲတွင် ကောက်စိုက်ရင်း သီချင်းဆိုမည်။ ပြီးလျှင် ….. အကအပိုဒ်ပြောင်း ….။ ဒီတော့ ….. မင်းသမီးဝတ်စုံနှင့် ပြန်ကမည်။ တင်ဆက်ပုံပြောင်းမည်။ အကြောင်းအရာက လူထုဘ၀သို့ ၀င်မည်။
ညဘက် အပျိုမလေးတွေအနား ကာလသားလူပျိုတွေ လူပျိုလှည့်မည်။ လသာသာတွင် ….။ ကောင်မလေးတွေက ဗိုင်းငင်ချင် ငင်နေကြမည်။ လူပျိုကာလသားတွေက အနားတွင် စကားထာဖွက်မည်….။ ကျေးလက်ကို ဖော်မည်။ သီချင်းက ကျေးလက်သီချင်း ….။ ပြီးလျှင်တော့ အငြိမ့်မင်းသမီးက ….အကစွမ်းရည် ပြဖို့အတွက်ကတော့ စင်ပေါ်တက်ပြီး ကစေမည်။ ဤတွင်လည်း မင်းသမီး၏ အကကို တစ်ယောက်တည်း ကနေသည်ထက် ပို၍ "ကြွ"စေရန် အားဖြည့်မှုအဖြစ် ဟာမိုနီ ယိမ်းအဖွဲ့ကို ထည့်မည်။ မင်းသမီးနှင့် ယိမ်းအဖွဲ့၏ အကသည် ဆန့်ကျင်ဖက် ဆန်မည်ဆိုသော် …..ကြည့်သူအမြင်တွင်မူ လိုက်ဖက်မှု ရှိနေရမည်။ ဤသိုပ…. မိုးနတ်သူဇာတွင်စ၍ အငြိမ့်ရှုတင်အား ပြောင်းချင်၏။ ပြောင်းလဲလိုသော် ဇာဂနာနှင့် ရှေးရိုးစွဲတို့အကြား ပြဿနာဖြစ်၏။ ပရိပက္ခသည် ကြီး၍လာသည်။ နောက်ဆုံး …..မိုးနတ်သူဇာ ကွဲခဲ့၏။ မင်းသမီး (မ) သီတာဝင်း ဦးဆောင်သည့် မိုးနတ်သူဇာနှင့် (ကို) ဇာဂနာအသစ် ထူထောင်သည့် မြပုဏ္ဍာမာအငြိမ့်ဟူ၍ ….။
မြပုဏ္ဍာမာတွင် (ကို) ဇာဂနာနှင့်တွဲဖက် အညီဆုံးက "အရိုင်း" ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသော တင်ဆက်မှု အသစ်များနှင့် မြပုဏ္ဍာမာအား စခဲ့ကြ၏။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ "အမှတ်တရ ရတနာပုံ" အစီအစဉ်တွင် မြပုဏ္ဍာမာ၏ "ရှေးအငြိမ့်၊ အမျိုးသားအငြိမ့်" အစီအစဉ်တို့အား တင်ဆက် ဖျော်ဖြေခဲ့၏။ (ကို) ဇာဂနာ၏ "နေကောင်းသွားမှာပါ …." ၊ "အားလည်း နာတယ်၊ ခင်လည်း ခင်တယ် ….." ၊ သနားတယ် …." ၊ သိနေတယ်လေ …." ။ ပျက်လုံးများက လူထုစကား ဖြစ်၍လာသည်။
လူရွှင်တော်များနှင့် ပျက်လုံးများမှာမူ ပြောစရာမရှိ…..။ "အား" ကောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်။ မြပုဏ္ဍာမာ၏ အငြိမ့်ခန်းအဖွင့်အား ပရိတ်သတ် စိတ်ဝင်စားရန် (ကို) ဇာဂနာတို့ ပြင်ကြရပြန်သည်။ မင်းသမီး၏ အကအား ပရိတ်သတ်က တခုတ်တရထိုင်ပြီး ကြည့်ရှုချင်စေရန် မြပုဏ္ဍာမာ၏ အငြိမ့်အဖွင့် တေးထပ်အား အမျိုးသားနေ့ ဂုဏ်ပြုတေးထပ်နှင့် စသည်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး (ဦး)၀င်းဦးက ရေးပေး၏။
"….. မျိုးမြန်မာ စံပမာပြုသိရန်ဆို ကနက်၏သဏ္ဍာန် သီဟာကြငှာန်း ရွှေနန်းရွှေထီး ပြည်ကြီး ဟန်ထည် စည်တီးသံကြွယ် တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က လျှမ်း ……."
(ရတီ-၂၀၀၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ဇာဂနာ၏ဆောင်းပါး စာမျက်နှာ -၁၈၁ မှ)
၁၉၈၈ ခုနှစ် "၈" လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း၌ (ကို) ဇာဂနာသည် အနုပညာရှင် တစ်ဦးအနေနှင့် ဒီမိုကရေစီ အရေးတိုက်ပွဲတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့၏။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူထုတရားပွဲများတွင် (ကို) ဇာဂနာ အုပ်စိုးသူ အာဏာရှင်များအား သရော်သည့် ပျက်လုံးများက ထိမိလှ၏။
မကြာ …. ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက (ကို) ဇာဂနာအား ရန်ကုန်မြို့ဘားလမ်းရှိ စပယ်ဦးစာပေတိုက် အတွင်းမှာပင် ၀င်ရောက်၍ ဖမ်းဆီးခဲ့၏။
အငြိမ့်စင် မီးရောင်အောက်မှ နံရံလေးဘက်အကြား အမှောင်တိုက်အတွင်းသို့ (ကို) ဇာဂနာ ရောက်သွားခဲ့တော့၏။ သို့သော် …. (ကို) ဇာဂနာ၏ ပျက်လုံးများကမူ လူထုအကြား၌ ပျံ့နှံ၍နေ၏။ စစ်အုပ်စုမှ သေနတ်ပြ၍ (ကို) ဇာဂနာ၏ ပျက်လုံးများအား ဖမ်းဆီး၍မရ ….။
"အင်းစိန်" မှ ပြန်လာခဲ့ပြီးနောက် (ကို) ဇာဂနာ အငြိမ့်စင်ပေါ်သို့ တက်ခွင့်မရတော့ …..။ အာဏာရှင်တို့သည် (ကို) ဇာဂနာ၏ ပျက်လုံးများအား ဒီဝီဇံ တပ်မကြီးတစ်ခု၏ ကျည်ပစ်အားထက် ကြောက်လန့်ဟန်တူ၏။ (ကို) ဇာဂနာအား အငြိမ့်ကခွင့် လုံးဝခွင့်မပြုတော့ …..။
နှစ် နှစ်ဆယ်လုံးလုံး (ကို) ဇာဂနာ အငြိမ့်ကခွင့် မရ၊ ပျက်လုံး ထုတ်ခွင့်မရ …..။
ကန့်လန့်ကာ …..။ မီးရောင်အောက်၌ ဖျော်ဖြေ ကပြခွင့်မရသည့် (ကို) ဇာဂနာ…..။ ဘာလုပ်မည်နည်း ….။ သူ၏ အနုပညာက "ရပ်" ၍ မနေ…..။ "အ"၍ မသွား…..။ လူထုထံသို့ စီးဝင်ရန် ကြိုးစားဆဲ….။ (ကို) ဇာဂနာသည် …..ကန့်လန့်ကာ မီးရောင်အောက်မှနေ၍ …. ပိတ်ကားဖလင်ကြားနှင့် ဖန်သားပြင်သို့ ကူးပြောင်းရန် သူ့၏ အနုပညာအား လူထုထံသို့ စိမ့်ဝင် စီးဆင်းစေပြန်၏။
ဤတွင် …. ဟာသသရုပ်ဆောင် (ကို)ဇာဂနာ …. ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ …. ဟူ၍ ဖြစ်လာခဲ့ပြန်၏။ အငြိမ့်စင်တွင် ကိုယ်တိုင် မီးရောင်အောက်သို့ မ၀င်နိုင်သော်လည်း …. ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်မှနေ၍ ၀ါယမ စိုက်ပြန်သည်။ ကင်ကောင်း၊ ဂေါ်ဇီလာ၊ ညောင်ညောင် ….။ ထင်ပေါ် ၊ ဒိန်းဒေါင်၊ အာနို ….။ ထိန်ထိန်၊ စုတ်ဖွား၊ ချက်စူး….တို့အား (ကို)ဇာဂနာက မီးရောင်အောက်သို့ ရောက်အောင်ပို့ပေး၏။
အငြိမ့်စင်ပေါ်သို့ တက်ခွင့်မရသည့် (ကို)ဇာဂနာသည် ဖန်သားပြင်မှတဆင့် "မိုးအငြိမ့်" ဟူ၍ VCD နှင့် လူထုအား ဖျော်ဖြေပြန်၏။ အောင်မြင်၏။ လူထုမှ အားပေး၏။ ထိုနောက်…. ရာဇာနေ၀င်းနှင့် " ရာဇာကြီး နှစ်ပါးခွင်" အား ဒါရိုက်တာ မောင်သူရမှ ရိုက်၏။ အငြိမ့်စင်မြင့်မှ လုပ်ချင်သည်များအား လုပ်ခွင့်မရခင် (ကို)ဇာဂနာမှ လုပ်နေခြင်းဖြစ်၏။ သြဂတ်စတြာနှင့်နှစ်ပါးက၏။ မြေ၀ိုင်းအကလည်းပါ၏။
အငြိမ့်စင်မြင့်မှ စ၍ ပရိတ်သတ်သိခဲ့ရသော (ကို)ဇာဂနာ သည် နှစ်-နှစ်ဆယ်လုံးလုံး အငြိမ့်ကခွင့် မရခဲ့…။ သို့သော် …. လူထုပရိတ်သတ်ကမူ လူရွှင်တော် ဇာဂနာအဖြစ် သူတို့၏ နှလုံးသည်းပွက်၌ စွဲမြဲစွာ ထင်နေဆဲ ….။ အငြိမ့်ကပြခွင့် မရသည့်နောက် …. ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုတို့တွင် သရုပ်ဆောင်သည်။ ဟာသ သရုပ်ဆောင် (ကို)ဇာဂနာ အဖြစ် လူထုပရိတ်သတ်က လက်ခံ အားပေးကြ၏။ တဖန်…. ရုပ်ရှင် ၊ ဗွီဒီယို ဇာတ်ကားများ ရိုက်၏။ ဒါရိုက်တာ မောင်သူရအဖြစ်နှင့် ….။ ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ ရိုက်ကူးသည့် ဇာတ်ကားများက …. မဲပြာပုဆိုးကားများမဟုတ် ….။ တွေးစရာပါ၏။ စဉ်းစားရန် ပါ၏။ နိမိတ်ပုံများသုံး၏။ သင်္ကေတများပါ၏။ ထူးသည်ဟု ဆိုရမည့်ကားများ ….။
လွန်ခဲ့သည့် ၂-နှစ်လောက်က ကြည့်ခဲ့ရသည့် VCD ဇာတ်ကားအား ပြန်၍ သတိရမိသည်။ ဒါရိုက်တာက မောင်သူရ ….။ မင်းသမီး တစ်ယောက်မှ မပါ။ မင်းသားဟု ပြော၍ရမည်က …..လူမင်း ….။ အဓိက ဇာတ်ကောင်များက ….(ကို)ဇာဂနာနှင့် (ကို)ကျော်သူတို့ နှစ်ယောက် ….။ ဇာတ်ရံများ ပါသည်။ အားလုံး လူရွှင်တော်များပင် ….။ ညောင်ညောင်… တစ်ယောက်ကိုတော့ မှတ်မိနေ၏။ (ကို)ကျော်သူနှင့် (ကို)ဇာဂနာတို့ နှစ်ယောက် ငွေကြေးပြည့်စုံသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ …..။ သူတို့နှစ်ယောက် အလောင်းအစား ပြုလုပ်ကြ၏။ အခြေခံမရှိသော သူတစ်ယောက်အား ငွေကြေးများ ပုံပေးလိုက်လျှင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ……။ အလုံးစုံ ပျက်စီးခြင်းသို့ ဆိုက်သွားမည်လား….။ ဒါမှမဟုတ် …. ။ လောင်းကြေးက ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက်ကြေး….။ ဤတွင် ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ ရိုက်ပြ၏။ လူမင်းက ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံး ကျူးကျော် ရပ်ကွက်တွင် နေသည်။ ပထွေးနှင့် … … ပထွေးက အရက်သမား၊ အမေက ပထွေးကို ကြောက်ရသည်။ ပထွေးက မင်းသားကြီး (ဦး)အောင်လွင် …..။ လူမင်းက မြို့တွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် လုပ်သည့် အလုပ်ကြမ်းသမား …..။ အလုပ်သမားပထွေးနှင့် ကြီးခဲ့ရသည့် လူငယ်တစ်ဦး …..။ ပညာမသင်ခဲ့ရ…..။ လောကနီတိမသိ။ လုပ်ခထဲမှ ပထွေးအား အရက်ဖိုး ပေးရသည်။ ဤဇာတ်ကောင် လူမင်းအား (ကို)ကျော်သူနှင့် (ကို)ဇာဂနာက ငွေကျပ် ဆယ်သိန်းခေါ်ပေးပြီး …. သူဘာဖြစ်မည်ကို အလောင်းအစား လုပ်ကြ၏။ မကြာ …. ငွေဆယ်သိန်းအား မစီမံတတ်၍ လူမင်း အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းခြင်းသို့ ဆိုက်သွား၏။ မိခင်သေ၏။ ဘ၀ပျက်၏။
ဤတွင် (ကို)ကျော်သူနှင့်(ကို)ဇာဂနာတို့၏ ဒိုင်ယာလော့များနှင့် ဇာတ်လမ်းအားပို့၏။ အာဏာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ငွေကြေးဓနတို့ကား ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှု မပြုလုပ်နိုင်ပဲ ပိုင်ဆိုင်နေပါက … မိမိနှင့် မိမိ ပါတ်ဝန်ကျင်းကိုပါ အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းခြင်းသို့ ဆိုက်ရောက်စေကြောင်း …..။ ပြီးပြီ …..။
သို့သော် …. ကျနော်က ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ ရိုက်ပြသည့် "နိမိတ်ပုံ" များအား ရှာနေမိသည်။ လူမင်းအား လူမင်းအဖြစ် မမြင်တော့…..။
(ကို)ဇာဂနာက အနုပညာတွင် အဘက်ဘက်မှ အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုရမည်။ ဘာကြောင့်နည်း …။ (ကို) ဇာဂနာ က သူ၏ အနုပညာအား သူ၏ နှလုံးသားနှင့် ဖန်တီး၏။ သူ့နှလုံးသွေးက လူထု၏ နှလုံးသွေးနှင့် ဆက်၍ စီးမျှောနေသည်။ လူထု ရင်ခုန်လျှင် (ကို)ဇာဂနာ ရင်ခုန်၏။ လူထု ရယ်ရွှင်လျှင် (ကို)ဇာဂနာ ရယ်ရွှင်၏။ လူထုတိုက်ပွဲဝင်လျှင် ထိုတိုက်ပွဲ၌ (ကို) ဇာဂနာရှိ၏။ ထိုကြောင့် …. (ကို)ဇာဂနာ၏ အနုပညာက လူထု၏အနုပညာ….။ လူထုနှလုံးသည်းပွတ်မှ လာသည့် အနုပညာ ……။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 10:22 AM0comments
8888 - 20 Years, Zarganar
Labels: 8888 - 20 Years, Diary
ဇာဂနာ ရဲ့ ၈၈ ဒိုင်ယာရီ အပိုင်းအစများ
( မိုးမခရဲ့ မိတ်ဆက် - ဇာဂနာ အနှစ် ၂၀ - မျက်စိထဲ ပေါ်လာသမျှကို အရင် တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။
၁၉၈၈ သြဂုတ်လ အရေးတော်ပုံမှာ အနုပညာရှင်တဦး၊ ကျောင်းသားတဦး အနေနဲ့ ရှေ့တန်းက ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့နှင့် ရှေးမဆွကတည်းက ရင်းနှီးသူ၊
၁၉၉၀ ၀န်းကျင်မှာ စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲကို သရော်တဲ့ သူတောင်းစားညီလာခံ ပြဇာတ်ကို နယ်လှည့် ကပြ၀ံ့သူ၊ တဦးတည်းသာမဟုတ် အနုပညာဝိုင်းတော်သားတွေနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်သူ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင် ၅ နှစ် ကျခဲ့သူ၊
၁၉၉၅ နှောင်းပိုင်း တောက်လျောက် အနုပညာရှင်၊ ဒါရိုက်တာတဦးအနေဖြင့် ရပ်တည်ပြီး လူမှုရေး ကူညီမှုများ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး ပညာပေး ရုပ်သံများ ဆောင်ရွက်သူ။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းမှာ အဖြူရောင် သက်တံ လှုပ်ရှားမှု၊ ထောင်က လွတ်မြောက်လာသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများဖက်က ရပ်တည် ထောက်ခံမှုများကြောင့် စစ်အစိုးရ မျက်မုန်းကျိုးခြင်း ခံရသူ။
ပွင့်လင်း လွတ်လပ်သော ဝေဖန်မှုများကြောင့် ၂၀၀၆ တွင် အနုပညာလုပ်ငန်းများ အပိတ်ခံရသူ၊ သို့သော်လည်း ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ အနုပညာအမွေအဖြစ် သီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့ကို မျိုးဆက်သစ် မျိုးစေ့ချပေးခဲ့သူ။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာအရေးတော်ပုံမှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ တရားမ၀င်သော်လည်း အားလုံးအတွက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် ရဲရင့်စွာ ရပ်တည်သူ၊ အထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ရသော်လည်း လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း စစ်အစိုးရ ဦးချိုးထားတဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲရင့်တက်ကြွလာစေဖို့ ဆေးရောင်စုံအငြိမ့်က ပြည်သူတွေကြားဆင်းပြီး ကပြချိန်တွင် လိုက်လံ အားပေးဆောင်ရွက်သူ၊ အဖိနှိပ်ခံ သံဃာတော်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများကို ပြုစုစောင့်ရှောက် လှူဒါန်းထောက်ပံ့သူ။
၂၀၀၈ နှစ်ဦးပိုင်း စစ်အစိုးရရဲ့ အတုအယောင် အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ရဲသူ၊ ၂၀၀၈ မေ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ဒုက္ခသည် ပြည်သူကြီးထံသို့ ရှိစုမဲ့စုတွေကို ထုပ်ပိ်ုးပြီး ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကုညီရေးတွေ ဆောင်ရွက်သူ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ လူထုအပေါ် တာဝန်မကျေခဲ့မှု၊ ရက်စက်မှုများကို ရဲရဲရင့်ရင့် အားလုံးရှေ့မှာ အားလုံးကိုယ်စား ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရရဲ့ ထပ်မံဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသူ - ဇာဂနာ … ။
သူ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကတည်းက သူရဲ့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းများ အကြောင်း တင်ဆက်လိုက်တာပါ။ )
၁၉၈၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော် အဖမ်းခံရပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အင်းစိန်ထောင်ကနေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါ ၁၉၉၀ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ထပ်ဖမ်းခံရပြီး ထောင်ငါးနှစ် အချခံခဲ့ရပါတယ်။ ပထမအကြိမ် အဖမ်းခံရစဉ်တုန်းက ထောင်တွင်းမှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ရေးခဲ့ရတဲ့ဒိုင်ယာရီ (အမှန်ကတော့ စာရွက် အပိုင်းအစလေးတွေပါ) ကို တစ်လောက အမှတ်တရ ပြန်ရလိုက်တဲ့အခါ တအား ၀မ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မပျောက်ပျက်အောင် သိမ်းထားပေးတဲ့ ထောင်ဝန်ထမ်းအဖိုးကြီးကိုလဲ
ကျေးဇူးတင်မဆုံးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေရာကနေ မှတ်တမ်းတင်လို့ ဖော်ပြသွားပါရစေ။
၁၉၈၈ ခုနှစ်သည် အရေးတော်ပုံနှစ်ဟု ဆိုရမလောက်ပင် အစိုးရအားဆန့်ကျင်သော အရေးအခင်းများသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့လေသည်။ မောင်ဘုန်းမော် အရေးအခင်းဟု အမည်တွင်ခဲ့သည့် မတ်လလှုပ်ရှားမှု ဂျင်ဂလိပွဲတော်ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခံခဲ့ရသည့် ဇွန်လအရေးအခင်း၊ ရှစ် လေး လုံး ဟု ကျော်ကြားခဲ့သော သြဂုတ်လ အရေးအခင်း၊ ထိုသည့်နောက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အုံကြွလှုပ်ရှားခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတို့ပင်တည်း။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်မှ အစပြုခဲ့သော ယင်းဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံသည်ကားး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မကြုံဘူးလောက်အောင် လူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့် အစိုးရဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ရကား ဆရာဝန်များ အနုပညာရှင်များ ရှေ့နေများစသည့် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များသာမက အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ အခြေနေမဲ့များ၏ လမ်းဘေးသမဂ္ဂပါမကျန် တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလေသည်။
အနုပညာရှင် တစ်ပိုင်းတစဖြစ်နေသော ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတသိုက်မှာလည်း ဤအရေးတော်ပုံ အစကာလများကပင် ပါဝင်ခဲ့ရကား ကျောင်းသားစိတ် တစ်ပိုင်း ကျန်နေသည့် အတွင်းဓာတ်၏ လှုံဆော်မှုကြောင့် တဖြေးဖြေး နက်မှန်းမသိ နက်ရှိုင်းစွာ ဝင်ရောက် ဆင်နွဲမိလေတော့သည်။
ထိုစဉ်က ကျွှန်တော်တို့၏ စုရပ်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့ ၂၁ လမ်းရှိ (ယခင် သဘင်ကောင်စီ ရုံးခန်း) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သဘင်သမဂ္ဂ ရုံးခန်းသည်လည်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ သပိတ်ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်စားလှယ်များ စတည်းချရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာလေသည်။ ရွှေပြည်အေးသမားများ၊ အကဲခတ် ဆရာများ၊ ရရင် ရ မရရင် ချ ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ငြင်းခုန်ရာ စည်းဝေးခန်းမတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက်မှာလည်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ခွင့် မကြုံရလောက်အောင်ပင် ဟောပြောပွဲများ စည်ဝေးပွဲများ နယ်စည်းရုံရေး ခရီးစဉ်များ၊ ဆန္ဒပြပွဲများ၊ အလှုခံကိစ္စများနှင့် ချာလပတ် ရမ်းနေကြရကား တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆက်သွယ်လိုလျင်ပင် ရုံးရှေ့ ကျေုာက်သင်ပုန်းမှတစ်ဆင့်သာ ဆက်သွယ်ရသည့်ဘ၀သို့ ဆိုက်ရောက်ရလေတော့သည်။
သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ လူတသိုက်ကို မျက်နှာချင်း ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင်ရအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်သည့်အရာကား ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပေါ်ပေါက် လာပါတော့သည်။ အခြား မဟုတ်ပါ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းပင်တည်း။
ထို့နေ့ ညနေ ၆းဝဝ နာရီခန့်၌ သဘင်သမဂ္ဂ ရုံးခန်းတွင်းသို့ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အလျှိုအလျှို ရောက်လာကြပါတော့သည်။ ဘာလုပ်ကြမလဲ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ကြဦးမလဲ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ …
သေချာတာတခုကတော့ နဂို နာမည်ကြီးနေကြသည့်အတိုင်း မိမိတို့ လူတသိုက်သည် အဖမ်းခံရလိမ့်မည်။ သည်တော့ ထွက်ပြေးကြမလား၊ သွား အဖမ်းခံမလား၊ တောခိုကြမလား … တခုခုတော့ လုပ်ရပေလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးတော့ သည်နေရာမှ အမြန် စွန့်ခွာရလိမ့်မည်။ အကယ်၍များ စစ်တပ်သည် သူ့တို့ကြေညာထားသည့်အတိုင်း အင်အားသုံး၍ သည်နေရာကို ဝင်ရှင်းခဲ့လျင်၊ လမ်းသူ လမ်းသားများ အချောင်သက်သက် ထိခိုက် နစ်နာကြမည် မဟုတ်တုံ့လော့။
မိမိတို့ အပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးမားနေပြီးဖြစ်သော လမ်းသူ လမ်းသားများ ကလည်း သူတို့ ကာကွယ်ပေးပါမည်၊ ဖွက်ထားပေးပါမည်၊ မသွားကြပါနှင့်ဟု အတန်တန် တားကြလေသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ တသိုက်မှာ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးတွေ ကိုယ်ဆွဲ၊ ရုံးခန်းတွင်းမှ စာရွက်စာတမ်းများကို အလျင်အမြန် ဖျောက်ဖျက်ကာ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝင်း အတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြတော့သည်။
ထိုအချိန်က ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်း၌ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေကြသော အုပ်စု အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး တို့မှာလည်း ညမထွက်ရ အမိန့်ကြောင့်ပင် အိမ်ပြန်ခွင့်မရဘဲ လူနာဆောင်အသီးသီး၌ သောင်တင်နေကြလေသည်။
ထိုကြောင့်ပင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက်မှာ အုပ်စု သုံးစုခွဲပြီး အဝတ်လျှော်စက် ဓာတ်အားပေးစက်နှင့် ရေခဲတိုက်များအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ပုန်းအောင်း နေရတော့သည်။
တချက် တချက်တွင် စစ်အစိုးရ အလိုမရှိ ဟူသော အော်သံများ၊ သေနပ်သံများ၊ လမ်းမများပေါ်တွင် ချထားသော အပိတ်အဆို့ အကာအရံများကို လိုက်လံရှင်းလင်းနေသည့် စစ်ကားသံများကို နာခံရင်း တစ်ညတာခရီးကို ကျော်လွန်ခဲ့ရသည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော်နှင့်အတူ ပုန်းအောင်းခဲ့သူများကို မှတ်တမ်းတင်လိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သဘင်သမဂ္ဂမှ မိုးဝင်း၊ မိုးမင်း၊ အရိုင်း၊ ညီညီလှိုင်(ညောင်ညောင်)၊ ညီဝင်းစိန်၊ ဖိုးဖြူ၊ စိုးဟန်၊ တပ်မတော် မှတ်တမ်းရုံးမှ တပ်ကြပ်အောင်သန်း၊ ကျောင်းသား တပ်ပေါင်းစုမှ ရွှေရောင် အောင်ဇော်မျိုး၊ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်းနှင့် တောင်ဥက္ကလာပမှ ဆိတ်မ ဆိုသူတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ညတွင်းချင်းပင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှ မင်းမင်း၊ ဇော်ထွန်းတို့ ခေါင်းဆောင်သည့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့သို့ လှမ်း၍ ဆက်သွယ်ပြီး မနက်မိုးလင်းသည်အထိ မည်သည့်နေရာမှ မသွားရန်နှင့် သောင်တင်နေသည့် ကလေးများကိစ္စ မိမိတို့လာမှ ရှင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားထားရပေသည်။
သိုို့ဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၅းဝဝ နာရီ ထိုးသည့် အချိန် မှာတော့ ကျွန်တော်တို့၏စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် အိမ်ပြန်ပို့နိုင်ခဲ့လေသည်။ သည်နောက်မှတော့ ညက ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲကို ချီတက်ရန် စိုင်းပြင်းကြရလေတော့သည်။
သည်မှာတင် ပြသနာက စ ပါလေပြီ။ ဆေးရုံကြီးအတွင်းရှိ သူအစုနှင့်သူ ရှိနေကြသော အဖွဲ့အသီးသီးသည် အင်တင်တင် ဖြစ်နေကြလေသည်။ တောင်လိုလို မြောက်လိုလို အစည်းအဝေး လုပ်ဦးမလိုလို၊ အီးအီး ပါဦးမလိုလိုနှင့် ချီတက်ရန်ကိစ္စကို ရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ် လုပ်ကြတော့သည်။
သည်တစ်ခါက တကယ်ကို သေနပ်နှင့် ပစ်တော့မှာ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစု ခေါင်းချင်းဆိုင်ရတော့၏။
ကဲ … ဘယ်သူမှ မထွက်ခင်တုန်းကတည်းက တို့ ထွက်ခဲ့တယ်၊ နောက် တနိုင်ငံလုံး ပါလာတော့၊ ဒို့ အရေးမှ မလုပ်ရရင် ခေတ်မမီတော့ဘူးဟဲ့ ဆိုပြီး ပါလာလိုက်ကြတာ၊ ခုတော့ ဘယ် တကောင်တမြီးမှ မတွေ့ရတော့ဘူး။ ခု ချက်ချင်း ပစ်ပါ၊ ဖမ်းပါနဲ့ စင်ပေါ်ကနေ လက်သီးလက်မောင်းတန်းခဲ့တဲ့ ဘယ် အနုပညာရှင်သမားဆိုတာတွေမှလည်း အရိပ်တောင် မတွေ့ရတော့၊ တို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ကလေးတွေကိုချည်းပဲ မင်းတို့ ချီတက်ကြတော့ ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်တော့မလား၊ အသေခံခိုင်းလိုက်တော့မှာလား။ ကိုင်း … ဘယ်သူ ထွက်ထွက်၊ မထွက်ထွက် တို့ ထွက်တယ်ကွာ ဟု ကြိမ်းဝါးပြီး၊ ကိုဇင်ဝိုင်းရယ်၊ (မိုးဝင်း)ရယ်၊ မောင်စိန်ထွန်း(မိုးမင်း)ရယ်၊ အောင်သန်းဦး(အရိုင်း)ရယ်၊ မောင်ရွှေရောင်ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်၊ နောက်ပြီး ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှ နိုင်လင်းနှင့် ကျော်မြင့်တို့ပါ ပေါင်းကာ စုစုပေါင်း ရှစ်ယောက်တည်းဖြင့် စတင် ချီတက်ခဲ့ကြပါတော့သည်။
စစ်အစိုးရ အလိုမရှိ။ စောမောင် အစိုးရ အလိုမရှိ။ ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့ စစ်ပညာ ကျောင်းသားပြည်သူ သတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး … စသော ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတလျှောက် ထိုမှ ဘုရားလမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဘုန်းကြီးလမ်းမှတဆင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း ပြန်လည်ချီတက်ခဲ့ကြရာ တစ်ပတ် ပတ်မိသည့်အချိန်မှာဖြင့် လူတန်းကြီးမှာ နှစ်ထောင် သုံးထောင်ခန့် ဖြစ်လာတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသော အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ လူ လေးထောင် ကျော်ကျော်ခန့်ကို ဦးဆောင်ပြီး မြို့တော်ခန်းမသို့ ဦးတည်လိုက်တော့၏။ ( ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမယ်)
Posted by MoeMaKha at 12:55 AM7comments
White Rainbow - Burmese Poetry Festival 2006 Part ...